Prasta Khabar-कोरोनाभाइरसविरूद्धको खोप किन्न नेपाललाई ४८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने
कोरोनाभाइरसविरूद्धको खोप किन्न नेपाललाई ४८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने
७ मंसिर, हेटौंडा । कोरोना भाइरस विरूद्धको खोप किन्न नेपाललाई ४८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गठन गरेको विज्ञ समितिले कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध भए खरिद गर्न करिब ४८ अर्ब लाग्ने अनुमान गरेको हो ।
खोपको व्यवस्था आन्तरिक स्रोत तथा बाँकी रकम भने दातृनिकाय र विकास साझेदारबाट लिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी रहेको डा. उप्रेतीले जानकारी दिए । खोपको विश्वव्यापी गठबन्धन गाभीले ‘कोभ्याक्स’ कार्यक्रमअन्तर्गत् कम र मध्यम आय भएका नेपालसहित ९२ देशलाई खोप उपलब्ध गराउन सहयोग गर्छ ।
नेपालले गाभीमार्फत् पाउने खोप सुरुमा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेकालाई उपलब्ध गराइने डा. उप्रेतीले बताए । अहिले कोरोनाभाइरसविरूद्ध निर्मित खोपको परीक्षणमा विश्वभर महत्वपूर्ण प्रगति भएको छ । एक दर्जनभन्दा बढी खोप तेस्रो चरणको ‘क्लिनिकल’ परीक्षणमा रहेका छन् ।